တစ်ဦးကို FLASH DRIVE ကနေရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဖယ်ရှားဖို့ဘယ်လို - USB FLASH DRIVE ကို - 2019
အဓိက USB flash drive ကို
အများစုက Apple က-အသုံးပြုသူများကဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံအတွက်စက်ပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထား။ ထိုသို့သောနည်းလမ်းအကြောင်းအရာ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုများကိုသာဖြစ်နိုင်စေသည်, ဒါပေမယ့်လည်းမည်သည့်အချိန်တွင်ပန်းသီး gadgets ၏အခြားပိုင်ရှင်များနှင့်အတူမျှဝေဖို့။ အထူးသဖြင့်ယနေ့ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်တယောက်ကိုတယောက် iPhone ကိုမှဗီဒီယိုလွှဲပြောင်းနိုင်ပုံကိုအသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
တယောက်ကိုတယောက် iPhone ကိုမှဗီဒီယိုလွှဲပြောင်း
Apple ကယခုနည်းလမ်းများစွာတယောက်ကိုတယောက် iPhone မှ, ရိုးရှင်းတဲ့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကိုဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ပေးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့အများဆုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့ထိရောက်သောကိုကြည့်အောက်တွင်။
ကျွန်တော်အခြားအသုံးပြုသူရဲ့ iPhone ကိုဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ရွေးချယ်စရာစဉ်းစားရန်ဆက်လက်သတိပြုပါ။ သငျသညျအဟောင်းကနေအသစ်သောစမတ်ဖုန်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုအပြင်သင်သည်အခြားသတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းချင်လျှင်, backup လုပ်ထားအင်္ဂါရပ်ကိုသုံးပါ။ ယခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင် commented အိုင်ဖုန်းမှအိုင်ဖုန်းကနေဒေတာတွေကိုလွှဲပြောင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက။
iPhone ကိုမှ iPhone မှဒေတာများလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို: ဆက်ဖတ်ရန်
Method ကို 1: AirDrop
အထက် iOS ကို 10 နဲ့အပြေးပန်းသီးစမတ်ဖုန်းပိုင်ရှင်များချက်ချင်း AirDrop အင်္ဂါရပ်ကနေတစ်ဆင့်အခြားအသုံးပြုသူများဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများနှင့်အတူမျှဝေနိုင်ပါသည်။ အဓိကအခွအေနေ - နှစ်ခု devices တွေကိုအနီးအနားမှာဖြစ်ရပါမည်။
စတင်ရန်, သေချာသည်ဗီဒီယို enabled AirDrop feature ကိုယူပြီးလိမ့်မည်သည့်ကိရိယာကြောင်းပါစေ။ ပွင့်လင်း Settings များနှင့်အပိုင်းကိုသွား "အခြေခံ".
ကို Select လုပ်ပါ "AirDrop"။ သငျသညျတက်ကြွ option ကိုဖူးပြီ Check "လူတိုင်း" သို့မဟုတ် "သာလျှင်ဆက်သွယ်ရန်" (ဒုတိယများအတွက်ရင်းမြစ်ဖုန်းစာအုပ်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားပြီးလိုအပ်သည်) ။ အဆိုပါ Preferences ကိုပြတင်းပေါက်ပိတ်လိုက်ပါ။
အခုတော့ဒေတာထုတ်လွှင့်မည်သည့်ဖုန်းများတွင်လာသည်။ ပေါ်မှာ app ကိုဖွင့်ပါ "ဓာတ်ပုံ" နှင့်ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုရွေးချယ်ပါ။
အောက်ခြေလက်ဝဲ pane ထဲကမှာနောက်ထပ် menu ရဲ့ icon ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ မျက်နှာပြင်တွင်ရုံဗီဒီယိုကိုအောက်တွင်, သင်သည်အခြားအသုံးပြုသူသည် iPhone (ကျွန်ုပ်တို့၏အမှု၌, ဒီဧရိယာဗလာဖြစ်နေသည်, ဆိုလိုသည်မှာဖုန်းကိုလှည့်ပတ်။ အေမ) ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
တစ်စက္ကန့်ယန္တရားအတွက် data တွေကိုဖလှယ်ခွင့်သတိပေးခံရရပါမည်။ ကို Select လုပ်ပါ "လက်ခံပါသည်"။ တစ်ဦးကတခဏအကြာတွင်ဗီဒီယိုလွှဲပြောင်းပြီးပြည့်စုံသည် - သင်ကတူညီတဲ့လျှောက်လွှာအတွက်ကအားလုံးကိုရှာဖွေနိုင်သည် "ဓာတ်ပုံ".
Method ကို 2: iMessage
သို့သော်မည်သို့ရှိရာဒုတိယ ayfon မဟုတ်လှည့်ပတ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်သလော သငျသညျအခမဲ့မီဒီယာနှင့်အခြား Apple က-အသုံးပြုသူများအတွက်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြု built-in tool ကို - ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျ iMessage ရရှိပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ gadget ကကြိုးမဲ့ကွန်ရက် (Wi-Fi သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအင်တာနက်) ချိတ်ဆက်နေစေရမည်နှစ်ဦးစလုံး, ဗီဒီယို၏ဂီယာအဘို့သတိပြုပါ။
သငျသညျစတင်ခင်မှာ, ဖုန်းနှစ်ခုလုံးတွင် iMessage ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးပါ။ ဒီအလုပျက Settings app ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရွေးဖို့ "မက်ဆေ့ခ်ျများ".
ပစ္စည်းသေချာပါစေ "iMessage" activated ။
ဗီဒီယိုတစ်ကား, app ကိုပေးပို့ဖို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာက iPhone ပေါ်တွင်ဖွင့်ပါ "မက်ဆေ့ခ်ျများ"။ သက်ဆိုင်ရာအိုင်ကွန်ပေါ်အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာအသစ်တခုချက်တင် tapnite ဖန်တီးရန်။
အမှတ်အနားမှာ "ရန်" အဆိုပါအပေါငျးလက်ခဏာတွေနဲ့အိုင်ကွန်ကိုရွေးပါ။ မျက်နှာပြင်သင်သည်လက်ျာလူတစ်ဦးကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်အဆက်အသွယ်များစာရင်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုသူသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်စာရင်းထဲတွင်မပါလျှင်, ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ဖုန်းနံပါတ် mount ။
user name အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်အတွက်မီးမောင်းထိုးပြမဖြစ်သင့် - ကဗီဒီယို iMessage မှတဆင့်လှေတျတျောမူလိမ့်မည်ဟုသင်တို့အားပြောပြလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကမ္ပည်းအတွက်သတင်းစကားကိုရိုက်ထည့်ဖို့ဆိုလိုပေသည် « iMessage »။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အစိမ်းရောင်မီးမောင်းထိုးပြခြင်း, အလားတူကျောက်စာလျှင်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ကြဘူး - တဲ့ function လှုပ်ရှားမှုစစ်ဆေးပါ။
အောက်ပိုင်းလက်ဝဲထောင့်, ရုပ်ရှင်၏အိုင်ကွန်ကိုရွေးပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဗီဒီယိုရှာဖွေရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်သင့်ရဲ့ device, သင်၏ပြခန်း။
ဖိုင်ကိုလုပ်ငန်းများ၌သောအခါ, သင်သာသည်သူ၏ပေးပို့ခြင်းဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည် - အပြာရောင်မြှားကိုရွေးချယ်ပါ။ ခဏပြီးနောက်, roller အောင်မြင်စွာမှတဆင့်ကူးစက်သောလိမ့်မည်။
သငျသညျ iPhone ကိုမှ iPhone မှဗီဒီယိုများလွှဲပြောင်းရန်အခြားအညီအမျှအဆင်ပြေကျင့်တို့နှင့်အကျွမ်းတဝင်နေခဲ့လျှင် - မှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုအကြောင်းကိုသိရန်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်။
ဗီဒီယို Watch: Alzheimers Is Not Normal Aging And We Can Cure It. Samuel Cohen. TED Talks (နိုဝင်ဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © USB flash drive ကို 2019